हेर्नुहोस् तपाईको कार्तिक महिनाको आर्थिक राशिफल कस्तो रहेको छ ? - Financial Notices
कार्तिक १३,२०७७ / ०८ : २१
Financial Notices 2077-7-1
कार्तिक महिनाको आर्थिक राशिफल (२०७७)
हेर्नुहोस् आज कार्तिक १ गते शनिबार तपाईको आर्थिक राशिफल कस्तो रहेको छ ?
मेषः साथीभाईको सहयोगले बिग्रेको काम बन्ने र आम्दानी पनि बढ्ने।
वृषः धनको हानी हुन सक्ने र काममा रोकबट आउन सक्ने।
मिथुनः काममा मेहेनत गर्नु पर्ने र अर्थोपार्जन सामान्य रहने।
कर्कटः नयाँ कामको प्रारम्भ हुन सक्ने र यात्रामा लाभ।
सिंहः आम्दानी बढ्ने र मान सम्मान प्राप्त हुने।
कन्याः लगानीबाट उचित प्रतिफल मिल्न नसक्ने।
तुलाः नोकरीमा पदोन्नति प्राप्त हुने र व्यवसायबाट लाभ।
वृश्चिकः जग्गा वा भूमिबाट हानी हुन सक्ने।
धनुः साथीभाईबाट काममा सहयोग र व्यवसायीक लाभ।
मकरः हतारको निर्णयले पछुताउनु पर्ने र खर्चमा वृद्धि।
कुम्भः मनमा उत्साहको कमी र आम्दानी सामान्य।
मीनः काममा आर्थिक प्रगति र मानसम्मान प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहने।